Horgale Faratoon Oo Jeegaanta Ugu Magacaaban Wasiirka Waxbarashada Nin Caddaan Ah Soo Gaarsiyay Tuulada Guumays, oo 80 KM, Waqooyi-Galbeed Ka Xigta Laascaanood! – HORNAFRIC MEDIA
Horgale Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon), oo Maamulka SNM, ee u xuubsiibtay Maamulka Jeegaanta, ugu magacaaban Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska, ayaa waxa uu soo galbiyay Wefdi uu ku jiray Hal Nin oo Caddaan ah, iyo Koox Isaaq ah, oo Hay’adaha UN-ka kala shaqaysan jiray Hargaysa iyo Galbeedkeeda, Deegaanka Guumays ee Gobolka Sool.
Waxa xusid mudan:
Kow, in Faratoon caddaynayo uu Wafdigaan soo gaarsiiysay Deegaanka Guumays oo ugu soo baallaysa Gobolka Sool xagga Deegaanka Togdheer ee Jeegaanta; waayo, Guumays waxa ay Waqooyi Galbeed ka jirtaa Laascaanood ilaa 80 km; halka ay kaabiga ku hayso Oog iyo Caynabo, oo Isaaqu xalaalsaday 100-kii Sano oo u danbeeyay.
Labo, in Faratoon caddaynayo in Ninka Caddaanka uu ka hari doono, isla Maanta, iyaguna ay quud-darraynayaan in ay gaaraan Ari-Caddeeye, oo iyaduna ku dhowaad 35 Kilometer ka soo xigta Waqooyi Galbeed Xagga Laascaanood.
Warwareegaye, Xaafadaha waan ka baqayaaye, goorma ayaa ay Guumays noqotay Laascaanood? Tan kale, Wufuudda Horgalayaashu ma isku soo sawiraan Dadweynaha ama Deegaanna da ay sheegayaan in ay booqdeen??
Maxaa Gaalada Beenta loogu sheegayaa????
Abiya Ahmed oo Runta u Sheegay Dhaxal Sugaha Imaaraadka…Daawo